Soosaarayaasha & Shirkadaha dhalada PC - Warshadda dhalada PC PC
Dhalada biyaha isboortiga ee banaanka
Dhalada biyaha la qaadan karo ee loogu talagalay ciyaaraha dibada. Si fudud ayaa loogu ridi karaa bacda dhexda, boorsadaana way buuxin kartaa qoyaanka waqti kasta iyo meel kasta. Naqshadeynta istiraatijiyaddu wax culeys ah kuma keento layliga.
Dhalo Fiican Eco Saaxiibtinimo oo tayo sare leh Dhalo Biyo
Dhalada biyaha ee isboortiga banaanka oo ka samaysan alaabta deegaanka u fiican ayaa ka fudud, fudud oo la qaadi karo oo si fudud loo isticmaali karo marka loo eego dhalooyinka biyaha ee caadiga ah. Ku habboon inta badan cayaaraha dibedda ee u baahan fuuq-baxa degdegga ah. Sida orodka, fuulitaanka, jimicsiga, tababarka iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waa mid deegaanka aad ugu habboon, iyadoo la adeegsanayo agab heer-cunto ah oo aan lahayn BPA.
Dhalo ballaaran oo lagu furayo Dhalada Isboortiga Dibadda
Dhalada isboortiga ee banaanka oo leh gacanka iyo daboolka boorka, taas oo aan kaliya hubinaynin ku habboonaanta laakiin sidoo kale hagaajinaysa nabadgelyada. Marka la barbardhigo kettles-ka caadiga ah, waa mid sii waara, ammaan ah oo la isku halleyn karo, kuna habboon caymiska. Aad ugu habboon ciyaaraha dibadda ama isticmaalka ardayda. Awood dhexdhexaad ah oo ah 500 ml. Way fududahay in la qaado iyadoo lala kulmayo baahiyaha biyaha.
Dhalo BPA caaga ah oo Caadi ah oo Bilaash ah
Dhalo weyn oo isboorti oo leh silikoon gacmeed. Jirka koobku wuxuu leeyahay naqshad qaabeed u eg, jirka koobka waa wareegsan yahay, khadadka waa siman yihiin, naqshada ergonomigana waa saf. Mashiinka nuugista ayaa lagu qalabeeyaa daboolka boodhka, kaas oo ammaan ah oo nadiif ah.
Dhalo Caag ah Cayaaraha BPA Baaskiil Wanaagsan oo Running ah
Dhalo weyn oo 1000ml ah oo awoodda dhalada ah. Waxay si buuxda u dabooli kartaa baahidaada buuxinta biyaha. Haddii aad ku wado baaskiil waddo, badda dhexdeeda, ama tababar jimicsi. Waxay u adeegi kartaa inay noqoto kaaliyaha biyo-gelinta waxayna kaa dhigeysaa mid firfircoon markasta.
Dhalo Eco saaxiibtinimo oo tayo sare leh Cayaaraha Biyaha
Dhalo biyo ah oo ku habboon dhammaan noocyada isboortiga dibedda. Furitaanka ballaadhan ayaa ku habboon buuxinta iyo nadiifinta. Naqshadaynta qaansada ergonomic ma fududa in laga siibto. Naqshadeynta biiyaha nuugista biyaha ayaa kuu oggolaanaya inaad dhaqso u buuxiso biyaha.
Dhalada Isboortiga Jimicsiga Bannaanka Dhalo BPA La Qaadan Karo
Adeegso agab bey'adda u fiican, sun aan sun ahayn, ur gaar ah ma leh, heerka cuntada, bilaash BPA, iyo daryeelka caafimaadkaaga. Jirka dhalada waa jilicsan yahay, fududahay in la tuujiyo dhalada, la dedejiyo xawaaraha cabitaanka, iyo in si dhakhso leh loogu buuxiyo. Jidhka dhalada ayaa leh naqshad aan sibiibixan u sahlaneyn oo la ridi karo. Si fudud loo qaado oo si nabadgelyo ah loo safro.
Tababarka Baaskiil wadista Fitness Dhalada Biyaha Ciyaaraha Dibadda
Dhalada waxay ka samaysan tahay waxyaabo caafimaad qaba mana laha ur gaar ah. Qaabka quruxda badan ayaa si taxaddar leh loo farsameeyay, oo khadadka ayaa siman, oo ku habboon gacanta. Daboolka boodhka ee aadka loo qorsheeyey si looga ilaaliyo sunta nuugista wasakhda. 750ml awood, si loo daboolo baahiyahaaga fuuq-baxa. Waxay aad ugu habboon tahay isboortiga banaanka sida baaskiil wadista, orodka, buurta fuula iwm.
Fitness Eco Friendly tayo sare leh Dhalada BPA Bilaash
Waxay si fiican ugu dhegi kartaa sariirta baaskiilka, waxaana sidoo kale lagu dhejin karaa boorsooyin kala duwan. Awoodda ballaaran ee 1000ml waxay dabooli kartaa baahiyaha fuuq-celinta xitaa inta lagu jiro jimicsiga adag. Qalabka deegaanka u fiican, dhalada ayaa ah mid jajaban, xiran oo u adkeysata, u adkeysata, isla markaana waarta. Dhalo biyo ah oo noqon karta kaaliyaha ugu fiican.
Balaastikada Cabitaanka Caaga Caadiga ah Bixinta Cufnaanta
Dhalada isboortiga banaanka waxaa si gaar ah loogu sameeyay isboortiga banaanka. Wareejinteeda, wax ku oolnimadeeda iyo cimri dhererkeedaba waxay ka dhigeysaa mid ku habboon isboorti badan. Sida orodka, fuulitaanka, baaskiilka, jimicsiga iyo wixii la mid ah. Iyadoo la adeegsanayo agab bey'adeed u fiican, caafimaad iyo badbaado leh, waxaa loo isticmaali karaa kalsooni. U ogolow inay kor u qaado safarkaaga ciyaaraha.
Shayga Maya: BTA035
Faahfaahinta: 173 * 67mm
Midabka: Midab gaar ah
Isticmaalka: Isboortiga banaanka